शाओमी मी शरीर संरचना स्केल २ मापन विश्लेषण ग्याजेट समाचार
यस पटक हामी परीक्षण गर्न सक्षम छौं फेरि एक सियाओमी उत्पादन। एउटा कारखाना जुन हामी जान्दछौं, स्मार्टफोन भन्दा धेरै टाढा जान्छ र पहिरन योग्य। र त्यसले हामीले कल्पना गर्न सक्ने विभिन्न प्रकृतिका उत्पादनहरू उत्पादन गर्दछ। आज हामी तपाईलाई एउटा उत्पादनको विश्लेषण ल्याउँदछौं जुन पहिले नै यसको पहिलो संस्करण, Mi शरीर संरचना स्केल २ को साथ धेरै सफल भएको छ यो बजार मा एक नयाँ उत्पादन छैन (यो एक बर्ष भन्दा बढि बिक्रीमा रहेको छ), यस प्रकारका सामानहरू नयाँ स्पाइक भएको छ.
शियाओमीले सफलता पछाडि सफलता प्राप्त गर्न जारी राख्छ यसको उत्पादनहरूको ठूलो उच्च प्रतिशतले यसको सिर्जना गर्छ, र एमआई शरीर संरचना स्केल २ प्रमाण छ कि मापन पनि एक फरक गर्न सक्छन्। हामीले विश्वास गर्न सक्ने भन्दा बढी माग गरिएको उत्पादन, विशेष गरी उनीहरूको लागि जसले आफैलाई ख्याल राख्छन् र तिनीहरूको शारीरिक विकासको ट्र्याक राख्छन्।
1 मेरो शरीर संरचना स्केल २, आफ्नो वजन र अधिक नियन्त्रण गर्नुहोस्
2 यो Mi शरीर संरचना स्केल २ मापन हो
3 सटीक मापन र सबै जानकारी तपाईंलाई आवश्यक छ
4 मेरो शरीर संरचना स्केल २ को कार्यक्षमता अधिकतम गर्ने अनुप्रयोग
5 विशिष्टता तालिका
मेरो शरीर संरचना स्केल २, आफ्नो वजन र अधिक नियन्त्रण गर्नुहोस्
एक प्राथमिक, यदि हामी यस प्रकारको उपकरणसँग परिचित छैनौं भने, हामी सोच्न सक्छौं कि एउटा तराजुले हामीलाई तौलको बारेमा जानकारी भन्दा बढी दिदैन। तपाईं पाउनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो वजनमा डाटा प्राप्त गर्नुहुन्छ, र थोरै। ठिक छ, छैन, तराजूहरू नयाँ टेक्नोलोजीहरू अनुकूल गर्न विकसित भएको छ। र अब सियामी जस्ता कम्पनीहरूलाई धन्यवाद तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनमा नतिजा र मापनको एक समूह पाउन सक्नुहुनेछ.
यो सहि छ, स्केल हाम्रो स्मार्टफोनमा जोड्दछ ब्लुटुथ .5.0.० मार्फत, र हामीलाई डाटा रकमको विविधता प्रदान गर्दछ जुन हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं। फरक उन्नत टेक्नोलोजी चिप्ससाथै एल्गोरिदमहरू जुन हाम्रो वजनको आधारमा प्यारामिटरहरू गणना गर्दछ र डाटा प्रविष्ट गरियो, रaधेरै विशिष्ट सफ्टवेयर उनीहरूले हामीलाई हाम्रो शरीरको भौतिक अवस्थाको बारेमा पूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछन्।
Mi शरीर संरचना स्केल २ हो आदर्श पूरक तपाईंको शारीरिक अवस्था अनुगमन गर्न र तपाईंको विकास नियन्त्रण गर्न यदि तपाईंले यसलाई सुधार गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने। हामी संग जानकारी प्राप्त गर्नेछौं १ 13 सम्ममा हाम्रो शरीरको संरचनाको बारेमा पूर्ण रूपमा वर्णन गरिएको मेट्रिक्स वर्तमान तपाईको बडी मास इन्डेक्स जान्नुहोस्, अन्य धेरै डाटा बीच, र तपाईको नराम्रो रेकर्ड सुधार गर्न सुझावहरू पाउनुहोस्.
यो Mi शरीर संरचना स्केल २ मापन हो
शारीरिक रूपमा श्याओमी एमआई बॉडी कम्पोजिशन स्केलको नयाँ संस्करण व्यावहारिक रुपमा पहिलो मोडेल जस्तै छ। मुख्य भिन्नता अधिक "प्रीमियम" सामग्रीहरूको प्रयोगमा निहित छ यसले तपाईंलाई उच्च गुणको छवि प्रदान गर्दछ। हामी भेट्छौं सेतो टेम्पर्ड गिलास पैदल क्षेत्रमा। एक डिजाइन सरल र सुरुचिपूर्ण। यससँग गोलाकार कुनाहरू छन् जसले यसलाई सहज र रमाइलो घटता दिन्छ।
La एकीकृत एलईडी डिस्प्ले गिलास मुनि लुकाइएको छ जब स्केल निष्क्रिय छ। र यसले देखाउँदछ जब हामी वजन पठन देखाउनमा जान्छौं।
तल हामी समावेश गर्न बाकस भेट्टाउँछौं ब्याट्रीहरुयस अवस्थामा हामीलाई चाहिन्छ A AAA आकारको ब्याट्री। केही ब्याट्रीहरू जुन शाओमीका अनुसार टिकाउन सक्छ, "सामान्य" मापन को उपयोग संग, एक बर्ष भन्दा बढी.
बक्स भित्र हामी कुनै पनि अतिरिक्त वा आश्चर्य को लागी पाउन छैन। मापन आफै, र एक सानो बक्स धेरै भाषाहरूमा प्रयोगको लागि निर्देशनहरू सहित।
सटीक मापन र सबै जानकारी तपाईंलाई आवश्यक छ
La मुख्य समारोह एउटा स्केलको हो सकेसम्म सही वजन नाप्नुहोस्। र जब हामी आफ्नो जीवन र आहारमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्छौं हाम्रो शारीरिक अवस्था सुधार गर्न, हरेक ग्राम गणना गरिन्छ। यसै कारणले Mi शरीर संरचना स्केल २ छ जी-आकारको मैंगनीज स्टील सेन्सर अविश्वसनीय परिशुद्धताका साथ। किलो, पाउन्ड, आदि बीच मापन परिवर्तन गर्न सक्षम हुनुको साथै, हामी प्राप्त गर्नेछौं grams० ग्राम सम्मको वजनमा सही जानकारी.
उन्नतलाई धन्यवाद BIA चिप हामी पाउन सक्छौं हाम्रो शरीरको राज्यमा पूर्ण डेटा सही र विस्तृत जानकारीको साथ। को पेसो, BMIको प्रतिशत शरीरको बोसो, मांसपेशी जन, नमी दर, प्रोटीन दर, भिजारल फ्याट, बेसल मेटाबोलिज्म, हड्डीको मास, शारीरिक आयु, आदर्श वजन, शरीरको प्रकार, र स्वास्थ्य स्कोर। के तपाईलाई आफ्नो शरीरको बारेमा यति धेरै थाहा छ?
मेरो शरीर संरचना स्केल २ को कार्यक्षमता अधिकतम गर्ने अनुप्रयोग
विकासकर्ता: Huami Inc.
हामी जहिले पनि पूर्ण उपकरण वा एक मिल्दो जेनेरिक अनुप्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको आफ्नै अनुप्रयोग प्रयोग गर्ने बीचको भिन्नताका बारेमा कुरा गर्छौं। प्रयोगकर्ता-स्तरको अनुभवले यो प्रस्ताव गर्दछ मी फिट प्रत्येक र प्रत्येक एक लाई नियन्त्रण गर्नको लागि Mi शरीर संरचना स्केल २ हामीलाई प्रदान गर्न सक्षम छ अचम्मको छ। हामी सिर्जना गर्न सक्छौं १ 16 भन्दा बढि प्रोफाइलहरू प्रत्येक प्रयोगकर्ताको विकासको एक धेरै विस्तृत नियन्त्रण राख्न।
हाम्रो शाओमी स्केल स्वचालित रूपमा प्रत्येक व्यक्ति जसले यसलाई प्रयोग गर्दछ पत्ता लगाउँदछ, यदि पहिले दर्ता गरिएको छ। बनाउनुहोस् तौल र अन्य जानकारी को पठन, त्यो सीधा सबै उपयोगकर्ता डेटा संग भण्डारण गरिएको छ प्रश्नमा। र यसले हामीलाई प्रत्येक प्यारामिटरमा विकास वक्र देखाउँदछ।
मोडेल मेरो शरीर संरचना स्केल २
सामग्री प्रबलित गिलास र प्लास्टिक
संगतता iOS .9.0 .० वा उच्च र Android Android.4.4 वा उच्च
मापन एकाइहरू Kg - Lb - Jin
रिचार्जयोग्य ब्याट्री NO
ब्याट्री 1.5V AAA
मापन दायरा २०० किलोग्राम सम्म
स्केल विभाजन 50 g
आयामहरू 300 x 300 x 25 मिमी
वजन 1.7 किलो
लि link्क खरीद गर्नुहोस् मेरो शरीर संरचना स्केल २
मेरो शरीर संरचना स्केल २
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » शाओमी मी शरीर संरचना स्केल २ मापन विश्लेषण